Xog: Magacyada iyo sirta xildhibaannada Axmed Madoobe uu u wakiishay bur-burinta K/Galbeed - Caasimada Online
Home Warar Xog: Magacyada iyo sirta xildhibaannada Axmed Madoobe uu u wakiishay bur-burinta K/Galbeed
Xog: Magacyada iyo sirta xildhibaannada Axmed Madoobe uu u wakiishay bur-burinta K/Galbeed
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa muddooyinkan danbe soo if baxay xildhibaano olole siyaasadeed ka wada Gobolka Bakool oo cadaadis ku haya maamulka Koonfur Galbeed ee uu hogaamiyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, kuwaasoo ay isku beel ka soo jeedaan hogaamiyaha Juba Axmed Maxamed islaam (Axmed Madoobe).
1 – Xildhibaan C/wahaab Ugaas Khaliif
2 – Xildhibaan Axmed Aabi Aadan
3 – Xildhibaan Maxamed Iidle Xerow
C/waaxid Ugaas Khaliif wuxuu hore u soo noqday wasiir iyo ra’iisal wasare ku xigeen, wuxuuna saaxiib aad ugu dhow la yahay madaxweynaha Puntland C/weli Gaas. Dadka qaarkii waxay ku tilmaamaan safiirka C/weli Gaas y u jooga Muqdisho. Inkastoo uu yahay nin af gaaban haddana wuxuu hormuud ka yahay qaska hadda socda ee Ceelbarde, waxayna heyb ahaan isu dhow yihiin Axmed Madoobe.
Xidhibaani Axmed Aabi waa mid ka mida xildhibaanada ugu afka dheer ee taageera Axmed Madoobe wuxuuna la wareegay xilkii C/rashiid Xiddig ee difaaca maamulka Jubba iyo hogaankiisa. Wuxuu ka dhex muuqday isaga iyo C/waaxid Ugaas Video ay xildhibaano sheegay inay Daarood yihiin ku sheegeen inay leeyihiin kala bar gobolka Sh/hoose, Bakool ay saddex degmo ku leeyihiin, isla markaan degaan balaaran ay ka degaan Baydhaba.